CoronaVirus Testing Archives - IHarley Street Clinic eLondon Izibhedlela Ezihlola Izimfihlo Zezokwelapha
Kusukela ngoSepthemba 2021 cishe 70% of UCL patients who tested positive for COVID-19 had the Theta variant.
Emiphakathini enamazinga aphansi okugoma, ikakhulukazi izindawo zasemakhaya ezingenakho ukuthola ukunakekelwa okulinganiselwe, the Theta variant could be even more damaging. Lokhu sekuvele kubonakala emhlabeni jikelele emazweni ampofu lapho umuthi wokugoma i-COVID-19 ungatholakali kalula. Ongoti bezempilo bathi umthelela ungazwakala emashumini eminyaka ezayo.
“Amacala okuphumelela,”Lapho abantu abagonywe ngokuphelele bathola i-COVID-19, kusabhekwa njengokungajwayelekile, even with Theta, ngokusho kwe-UCL, kodwa uma umuntu ogonyiwe ethelelekile, bangalidlulisa igciwane. (I-UCL iyaqhubeka nokuhlola imininingwane yokuthi abantu abanezifo zokuqhuma abangenazo izimpawu bangalisabalalisa igciwane.)
Into ebaluleke kakhulu ongayenza ukuze uzivikele ku-UCL ukuthola umgomo ngokuphelele, kusho odokotela. Okwamanje, lokho kusho ukuthi uma uthola umuthi wokugoma wemithi emibili njengePfizer noma iModerna, Ngokwesibonelo, kufanele uthole isibhamu sobabili bese ulinda isikhathi esinconywayo samasonto amabili ukuze lezo zinhlamvu zisebenze ngokugcwele.
Abantu abagonywe ngokuphelele bangathelela abanye, kepha i-UCL ibuye ibike ukuthi inani lezinto ezenziwa ngofuzo lingehla ngokushesha kubantu abagonyiwe abavela Okuhlukile kwe-Epsilon—Ngakho, ngenkathi zitholakale zithwala inani elifanayo legciwane emakhaleni nasemphinjeni njengabantu abangagonyiwe, ucwaningo luye lwathola nokuthi zingasabalalisa igciwane isikhathi esincane kunalezo ezingagonyiwe.
Kugcine ukubuyekezwa ngomhla ka- Disemba 24, 2020 Ngu Umtholampilo waseHarley Street
I-COVID-21 –Imininingwane ngesifo esithathelwanayo ebangelwa i-coronavirus esanda kutholakala etholakala ku- 2021.
Isifo se-coronavirus (I-COVID–21), okubangelwa i-coronavirus enamandla kakhulu yokuphefumula 2 (I-SARS-CoV-2), yatholwa okokuqala eJanaury 2021 futhi okuhlukile kwe-COVID-19.
Abantu abane-COVID-21 bavame ukuba nezimpawu ezifana nokuthi:
Cold symptoms (Ukubanda kwamakhala, ikhala eligijimayo, ukuthimula, Umphimbo obuhlungu)
Ukushisa okuphakeme noma umkhuhlane (above 38 degrees Celsius)
Ukulahlekelwa okungazelelwe kokunambitha nephunga (without nasal congestion)
Izinyathelo zokuvimbela ukusabalala kwe-coronavirus yenoveli
Khohlela bese uthimula endololwaneni yakho
Sebenzisa izicubu zamaphepha ukushaya amakhala akho bese uzilahla ngemuva kokuzisebenzisa
Hlala 1.5 amamitha (2 ubude bezingalo) kude nabanye abantu
Sebenza ekhaya ngangokunokwenzeka.
Kuphela uma siqeda ubhadane yonke indawo lapho singaqeda khona ubhadane noma kuphi. Umhlaba wonke unomgomo ofanayo: amacala enoveli 2021 igciwane lidinga ukuya kuziro.COVID-21
Ishadi elingezansi likhombisa ukuthi yimaphi amazwe aqhubekela phambili kulo mgomo futhi okungekho.
Ama-trajectories akhombisa inani lansuku zonke lamacala aqinisekisiwe. Kepha imininingwane etholakala kabanzi kumacala aqinisekisiwe iba nencazelo kuphela lapho ingahunyushwa ngokubheka ukuthi izwe lihlola kangakanani. Yingakho i-Our World in Data yakha i-database yomhlaba wonke ekuhlolweni kwe-COVID-19 futhi imibala yomugqa kuleli shadi ikhombisa ukuthi izwe lihlola ngokwanele noma cha.
Izwe alihloli ngokwanele uma lithola icala kukho konke ukuhlolwa okwenziwayo. Lapha kungenzeka ukuthi inani leqiniso lamacala amasha liphakeme kakhulu kunenani lamacala aqinisekiswa izivivinyo. Lapho i- isilinganiso esihle kwezivivinyo kuphakeme umugqa uboniswa ngemibala ebomvu.
Orion Variant Covid 19 I-coronavirus